कोरोना भाइरस संक्रमितमा देखिन सक्ने ११ लक्षण, कस्तो लक्षण देखिए के खाने, के नखाने? - ePosttimes
Homeकोरोनाकोरोना भाइरस संक्रमितमा देखिन सक्ने ११ लक्षण, कस्तो लक्षण देखिए के खाने, के नखाने?
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०६:३८ कोरोना, स्वास्थ्य 0
-कोभिड १९ संक्रमित बिरामीहरुलाई स्वस्थ, पोषिलो र सन्तुलित खानाको आवश्यकता हुन्छ। कोभिड १९ संक्रमितलाई अन्य दीर्घ रोग भए नभएको एकिन गरि आवश्यक पोषण व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता जीवनशैलीसँग सम्बन्धित दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरु कोभिड १९ संक्रमित भएमा संक्रमणका लक्षण र दीर्घरोगको प्रकृति समेतलाई ध्यानमा राखेर खानपान गर्नु पर्दछ। दीर्घ रोग समेत रहेका कोरोना संक्रमितले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सल्लाहमा खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
थोरै पछाडी ढल्किएर (४५ देखि ९० डिग्री कोणमा) बसाएर खाना खाने÷खुवाउने।
बिरामीले प्रयाप्त खाना नखाएर भिटामिन ए, सि, बि, डि, ई, जिंक, आइरन, फोलेट, फाइबर खानाबाट आवश्यक मात्रामा प्राप्त गर्न नसके चिकित्सक वा डाइटिसियनको सिफारिसमा खाद्य पुरकको प्रयोग गर्नुपर्दछ। -स्वास्थ्यखबर डटकम
483800cookie-checkकोरोना भाइरस संक्रमितमा देखिन सक्ने ११ लक्षण, कस्तो लक्षण देखिए के खाने, के नखाने?yes